Iphrofayili ye-Aluminium Factory | China Abakhiqizi bephrofayili ye-Aluminium kanye nabahlinzeki
Uchungechunge lwe-Aluminium Yezimboni
Curtain Wall Aluminium Uchungechunge
Iwindi nomnyango we-Aluminium Series
Iwindi Lesistimu ye-EOSS nomnyango
Aluminium Iwindi & Umnyango Series
Iphrofayili ye-aluminium yezimboni, eyaziwa nangokuthi: okokusebenza kwe-aluminium extrusion material, iphrofayili ye-aluminium alloy profile. Iphrofayili ye-aluminium yezimboni iyinto ye-alloy ene-aluminium njengengxenye eyinhloko. Izinduku ze-Aluminium zingatholakala ngezimo ezahlukahlukene zesigaba esiphambanweni ngokuncibilika nokushisa okushisayo. Kodwa-ke, inani le-alloy eyengeziwe lehlukile, ngakho-ke izakhiwo zemishini nezinkundla zokufaka izicelo zamaphrofayli ezimboni ze-aluminium nazo zihlukile. Ngokuvamile, amaphrofayili e-aluminium yezimboni abhekisa kuwo wonke amaphrofayili we-aluminium ngaphandle kwalawo okwakha iminyango namawindi, izindonga zamakhethini, ukuhlobisa kwangaphakathi nangaphandle nezakhiwo zebhilidi.
Iphrofayela ye-aluminium yezimoto
Ucwaningo lweqembu leHuajian Aluminium lubonisa ukuthi cishe u-75% wokusetshenziswa kwamandla uhlobene nesisindo semoto, ukwehlisa isisindo semoto kunganciphisa ngempumelelo ukusetshenziswa kukaphethiloli nokukhishwa. Uma kuqhathaniswa nensimbi, i-aluminium inezinzuzo ezisobala.
Iphrofayili ye-Curtain wall aluminium
Amakhethini kanye nezinhlelo zodonga lwamawindi zisetshenziswa njengezimvilophu zokwakha futhi kuqinisekisa ukungena kwelanga okukhulu ngaphakathi kwendawo yangaphakathi, kwakha indawo ephephile nenethezekile kubahlali besakhiwo. Ngaphezu kwalokho, izindonga zamakhethini e-aluminium ziyindlela ethandwayo ngenxa yenani lazo eliphezulu lobuhle kanye namathuba abo angenamkhawulo kuzicelo zokwakha.
Yiziphi izinzuzo ze-casement windo ...
Ukubambisana amasu: Huajian Alumin ...
Ubuhle be-Aluminium Form Work
Ucingo: 0536 335 666
Ikheli: No.5188 Donghuan Road, Linqu County, Isifundazwe Shandong, China